ကုမ္ပဏီသတင်း - သတင်း - Light On
ကြှနျုပျတို့ကို Call +86-755-23729642
ခေါက်သိမ်းနိုင်သော LED အလင်းကြီးထွား
White COB Strip LED
CCT COB LED ကြိုး၊
နီယွန် Flex COB Strip LED
LED Strip Light ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နည်းပညာတွင်အလင်းသည်အလင်း S ကိုကြီးထွားစေသည်
The MODEL S LED Grow Light, released by Light On Technology at the end of 2020, is novel in structure and simple in appearance. At the same time, it is extremely convenient for DIY power and spectrum.
Light On Technology is Attending the Asia-Pacific Industrial Hemp Industry Expo
Light On Technology သည် Asia-Pacific Industrial Hemp Industry Expo တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ယူနန်ဘူတာ - ဒုတိယ ၅၂၀ စက်မှုဇုန်လျှော်ပွဲတော်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂-၃ ရက်တွင်ကျင်းပမည်။
Updated Three Types LED Grow Lights
နှစ်လတာကာလအတွင်း Light On Technology သည်တန်ဖိုးကြီး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် LED ကြီးထွားလာသောမီးလုံးအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုအောင်မြင်စွာအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး၊ အိမ်တွင်းခြံများတွင်အိမ်ထောင်စုစိုက်ပျိုးရေးတဲများ၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ , ဒေါင်လိုက်ခြံများနှင့်ပြင်ပဖြည့်စွက်ဖန်လ......
Light On Technology Wishes all of youamerry christmas and happy new year.
လွန်ခဲ့သော ၂၀၂၀ သည်ခက်ခဲသော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည်ကြီးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးယုံကြည်ကြသည်။
A Container of Model F LED Grow Light is Ready for Shipment
နို ၀ င်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် Model F LED မီးထွန်းသည့်နောက်ထပ်ကွန်တိန်နာတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံကိုယူနိုက်တက်စတိတ်မှထွက်ခွာနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်သူတို့ကိုတွေ့ရန်မစောင့်နိုင်ပါ၊ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုရလဒ်နှင့် LED ကြီးထွားလာသောမီးများ အသုံးပြု၍ အထွက်နှုန်းမြင့်မည်......
A Good News From A Indoor Farm of Cannabis Growing in L.A.
Light On Technology သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များများစွာသောရိတ်သိမ်းခြင်းကိုတွေ့ရ။ ၀ မ်းသာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အဆိုပါခြံကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပထမမျိုးဆက် LED ကြီးထွားလာသောမီးများတပ်ဆင်ထားသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကပိုမြင့်......
အလင်းရောင်သည်မိုးလုံလေလုံစိုက်ပျိုးရေးတွင်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်းပွင့်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလင်းအဆင့်သည် ၇၅၀ မှ ၁၀၀၀ µMoles / m2 / s (PPFD) ကြားတွင်ရှိသည်။ သင်၏လ်တာတာမှအလင်းသည်သင်၏မြတ်သောအလင်းတန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဤအကောင်းဆုံးအလင်းတန်းကိုတတ်နိုင်သမျှအညီအမျှပေးနိုင်သည်။
2 / F, Jianyichuanggu စက်မှုဥယျာဉ်၊ Songbai အနောက်လမ်း၊ Shiyan လမ်း၊ Baoan ခရိုင်၊ Shenzhen City, China